ESI HỌRỌ IGWE USB FLASH - KỌMPUTA EGWU - 2019
Isi Kọmputa egwu
Atụmatụ maka ịhọrọ nri ziri ezi
Ngwunye netwọk VKontakte, dị ka ọ bụla ọzọ ịbụ saịtị na-ejikọta na mmekọrịta mmadụ na ibe ha, na-enye ohere nke ịza ajụjụ banyere ihe ọ bụla nwere ike itinye. Otú ọ dị, ọ na-eme na okwu ị dere edere na-abaghị uru ma na-achọ nkwụsị mbụ. Ọ bụ maka ihe ndị a ka onye ọrụ ọ bụla, na karịsịa onye edemede nke edemede ahụ kwuru, nwere ike ihichapụ okwu ọ bụla n'oge ọ bụla.
Anyị na-ehichapụ ihe VKontakte
Na isi ya, omume ndị metụtara njedebe nke okwu, siri ike yiri usoro yiri ya na posts na ibe.
Hụkwa: Otu esi ehichapụ posts na mgbidi
Lezienụ anya n'akụkụ nke dị mkpa, nke gụnyere n'eziokwu na nhichapụ ihe n'okpuru ihe ndekọ ahụ na-adabere n'otu atụmatụ ahụ. Ya mere, ọ dịghị mkpa ebe okwu ahụ fọdụrụ, ma ọ bụ na mgbidi, vidiyo ma ọ bụ post na isiokwu n'otu ìgwè, ihe bụ isi nke nhichapụ mgbe niile ka dị otu.
Hichapụ okwu gị
Usoro nke iwepụ akwụkwọ edemede gị otu ugboro bụ usoro iwu kwadoro na ịpị bọtịnụ ole na ole. O kwesiri iburu n'uche na ohere nke iwepu okwu nke aka gi di otutu karia na ndi ozo.
Na mgbakwunye na ntụziaka ahụ, ị ​​ga-eburu n'uche na eziokwu ahụ bụ VK saịtị nwere ngwaọrụ iji chọpụta ihe niile ị na-ahapụ. N'ezie, nke a, n'aka nke ya, na-enye aka mee ngwa ngwa ngwa.
Iji menu isi na aka ekpe nke ihuenyo, gaa "Akụkọ".
N'akụkụ aka nri nke ibe ahụ, chọta usoro igodo ma gbanwee na tab "Comments".
Ọ na-egosiputa kpamkpam niile posts nke gị onwe gị dere na ederede na-eji arụmọrụ arụmọrụ.
N'ihe banyere mgbanwe ọ bụla na nkọwa ebe ị jisiri ike hapụ akara gị, ndekọ ahụ nwere ike ịrị elu site n'ala ala ruo n'elu.
Chọta ntinye nke ị hapụrụ ihe ị kwuru.
Mee ka òké ahụ dee ihe odide ederede na n'akụkụ aka nri nke akụrụngwa isi, pịa akara ngosi obe na ngwa ngwaọrụ "Hichapụ".
Ruo oge ụfọdụ, maọbụ ruo mgbe ị na-eme ka ibe gị nweta ume, ị ga-enwe ike iweghachite ederede site na ịpị njikọ. "Weghachite"etinye n'akụkụ nke mbinye aka "Ozi ehichapụ".
Rịba ama bọtịnụ ahụ. "Dezie"na-esote akara ngosi a na-akpọbu. Site na iji njirimara a, ị nwere ike ịgbanwe ihe ederede ederede, mee ka ọ dịkwuo mkpa.
N'oge a, omume niile metụtara nhichapụ ihe nke aka gị kwụsịrị.
Hichapụ okwu onye ọzọ
Nke mbụ, na-ezo aka na usoro nke na-ehichapụ ihe ndị ọzọ kwuru, ọ bara uru ịkọwa na ị nwere ike imezu echiche a nanị n'ọnọdụ abụọ site na ihe niile kwere omume:
ọ bụrụ na e kwuwo onye ọrụ na ibe gị, n'okpuru post ị debere;
ịchọta ịza ajụjụ ọ bụla na ọha ma ọ bụ otu ebe ị nwere ikikere kwesịrị ekwesị iji wepụ ma dezie ederede n'aka ndị ọrụ ndị ọzọ.
Enwere ike ịchọpụta ihe ndị ọzọ na-ekwu maka posts gị, bụ nke ị gbanwere site na ndabara, ekele maka amaokwu a ekwuru. "Comments"dị na ngalaba "Akụkọ".
Ị nwere ike wepu aha na nchịkwa, Otú ọ dị, n'ihi nke a, ị ga-atụfu ikike ịdebanye aha ọhụụ ọhụrụ.
Enwekwara ike iji usoro ngosi VKontakte instant notification, nke interface nke ga-emepe site n'elu panel nke saịtị ahụ.
Mgbe, ozugbo, na-ehichapụ aha ndị ọzọ dị n'okpuru ndekọ ahụ, usoro dum adịghị dị iche na nkọwa ahụ eburu. Nanị mgbanwe dị mkpa ebe a bụ enweghị ike ịde ederede onye ọzọ.
Mgbe ịchọtara okwu ahụ achọrọ, yana ọnọdụ nke mgbochi ndị a kpọtụrụ aha, kpoo cursor òké na ya ma jiri aka ekpe na akara ngosi ahụ na obe na ngwa ngwaọrụ "Hichapụ".
Ị nwere ike weghachite ntinye ehichapụ, dịka dị na akpa ikpe ahụ akọwapụtara.
Ihe omuma atu ebe a bu ikike iji wepu ihe ndi ozo site na onye dere akwukwo a ka ewepu ya na nso nso. Iji mee nke a, pịa njikọ ahụ. "Ghichapụ ozi ya niile maka izu ikpeazụ".
Na mgbakwunye, mgbe i jiri ọrụ dị otú ahụ, ị ​​ga-ahụ ihe ndị nwere ike ime: "Akuko spam" ma "Blacklist", nke bara ezigbo uru mgbe ndekọ nke ndị ọrụ na-ebute mmebi iwu nke nkwekọrịta onye ọrụ netwọk VKontakte.
Na mgbakwunye na ntụziaka bụ isi, ọ dị mma ịkọtara na nkọwa ederede nke onye ọrụ ga-egosipụta ruo mgbe gị onwe gị ma ọ bụ onye edemede ga-emecha nhichapụ ya. N'otu oge ahụ, ọ bụrụgodị na ị mechie ohere nke ịza ajụjụ, enwere ike idezi onye dere akwụkwọ a ga-anọgide. Nanị nhọrọ maka ngwa ngwa na otutu mgbasa ozi bụ ịgbanwe ntọala nzuzo iji zoo ihe niile e dere na ha, ma e wezụga maka gị.
Idozi nsogbu na ndị na-emebi iwu
Ọ bụrụ na ịchọta okwu mmadụ nke na-akwadoghị iwu nke netwọk mmekọrịta a, ị nwere ike ịrịọ ya ka ọ wepu nchịkwa nke ọha na eze ma ọ bụ onye ọbịa.
Ebe ọ bụ na, maka ọtụtụ akụkụ, ndị ederede na-emebi iwu doro anya nke nkwurịta okwu enweghi ihe ịrịba ama ndị a maara nke ọma, usoro kachasị mma iji dozie nsogbu bụ iji ọrụ ahụ rụọ ọrụ "Mkpesa".
Mgbe ị na-eziga mkpesa maka okwu, gbalịa igosi ezigbo ihe kpatara mmebi ahụ, nke mere na a na-ele nsogbu ahụ anya ozugbo enwere ike ma ghara ileghara ya anya.
Jiri ọrụ a naanị mgbe ọ dị mkpa!
N'ihe banyere ọnọdụ ọ bụla a na-atụghị anya ya na nhichapụ ihe ọ bụla, a na-atụ aro ị kpọtụrụ nkwado na ụzụ na ngosipụta nke njikọta na ikwu.
Hụkwa: Otu esi ede ede na nkwado tech
https://termotools.com ig.termotools.com © Kọmputa egwu 2019